သတိပေးခြင်း: မှားယွင်းနေသည် QUERY ကို packet ကိုပေးပို့ခြင်းနေစဉ်။ PID = 831 အတွက် /home/admin/web/info-all.com/public_html/wp-includes/wp-db.php လိုင်းပေါ် 2056
gilyak ကိုယူကရိန်းမှရုရှားသို့ဘယ်လိုပြန်ဆိုသလဲ။ Glyaka - ရုရှားဘာသာပြန်ခြင်း "gilyaka" တွင်။ ၎င်းသည် "boot" ဟူသောစကားလုံးတွင်ရုရှား -isch ကဲ့သို့နောက်ဆက်နှင့်ပါရှိသောဌာနခွဲဖြစ်သည်။ ရုရှားဘာသာတွင်ထိုကဲ့သို့သောစကားလုံးမရှိပါ။ အဘိဓာန်…
ရှုပ်ထွေးပြီးရှုပ်ထွေးသောဝါကျတွင်ပုဒ်ဖြတ်ပုဒ်ဖြတ်ခြင်းအတွက်အခြေခံစည်းမျဉ်းများ။ မည်သည့်ဖတ်စာအုပ်မဆို FRY, ရှုပ်ထွေးသောစာကြောင်းများအပိုင်း SYNTAX (ဒြပ်ပေါင်း)၊ ကော်မာများစီစဉ်ခြင်း။ ဖြည့်စွက်သည် - ၁) SSP ၏အစိတ်အပိုင်းများအကြားဆက်သွယ်ခြင်း၊
ကြိယာ၏ပြီးပြည့်စုံသောပုံသဏ္theာန်ကိုမစုံလင်ခြင်းနှင့်မည်သို့ခွဲခြားနိုင်သနည်းစုံလင်သောကြိယာ၏ပုံစံသည်မေးခွန်းကိုအဖြေပေးသည်။ လွယ်ကူသော peasy! ပြီးပြည့်စုံသောကြိယာပုံစံကဘာလုပ်ရမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုဖြေသည်။
ရုပ်ရှင်အမျိုးအစားများကိုအင်္ဂလိပ်လိုရေးပါ။ ပိုကြီးလေ၊ ပိုကောင်းလေ။ အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် kjk နှင့်အတူလူတိုင်းအကြိုက်ဆုံးရုပ်ရှင်အမျိုးအစားကိုရွေးချယ်နိုင်သည်။ ထိုကဲ့သို့သောရုပ်ရှင်ဇာတ်လမ်းများ၏အမျိုးအစားများ ...
Sema နှင့် semema ဘာလဲ။ တိကျတဲ့ဥပမာတစ်ခုဖြင့်ရှင်းပြပါ။ Sememe (သို့) semantheme (ဂရိမှကျွန်ုပ်ဆိုလိုသည်။ အသုံးအနှုန်း phoneme, morpheme ဟူသောဝေါဟာရများနှင့်နှိုင်းယှဉ်နိုင်သည်။ ) သည်ဘာသာစကားအကြောင်းအရာအစီအစဉ်၏ယူနစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။
တည်နေရာကတည်နေရာနဲ့ဘယ်လိုကွာခြားသလဲ။ ဘယ်မှာနှင့်အခြားနှင့်မည်သို့။ 1 ကများသောအားဖြင့်ကျွန်မနဲ့ဖြစ်ပြီး၊ ကွင်းဆက်ကိုကြည့်ပြီးအဖြေ: ဒီစကားလုံးတွေဟာလဲလှယ်လို့ရလား။
မည်သည့်စည်းမျဉ်းအားဖြင့်“ ခုနစ်ရာနှုန်းမှ” မဟုတ်ဘဲ“ ရူဘီခုနစ်ရာနှုန်း” မှမှန်ကန်သနည်း။
အဘယ်စည်းမျဉ်းအရ "ခုနစ်ရာမှ" နှင့် "ရာဂဏန်းခုနစ်ရာမှ" မှန်ကန်သနည်း? "ရာဂဏန်း" ဆိုတဲ့စကားလုံးကို "မှတ်စု" ဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့အစားထိုးလိုက်ပါ။ အဲဒီနောက်သင်မှားမှာမဟုတ်ဘူး။ မှတ်စုခုနစ်ခုမှခုနစ်ရာမှဒီနေရာတွင်ကိန်းဂဏန်းများ၏ကြေငြာမှုစည်းမျဉ်းကအကျုံးဝင်သည်။ မှန်မှန်ကန်ကန်…
ဘယ်လိုဖြေမလဲ - "အဖြေကိုစောင့်နေတယ်" ဒါမှမဟုတ် "အဖြေကိုစောင့်နေတယ်"? ဆိုလိုသည်မှာ "ဘာကိုစောင့်ဆိုင်း" သို့မဟုတ် "အဘယ်အရာကိုစောင့်ဆိုင်း"?
ဘယ်လိုဖြေမလဲ - "အဖြေကိုစောင့်ဖို့" ဒါမှမဟုတ် "အဖြေကိုစောင့်နေတယ်"? ဆိုလိုသည်မှာ "ဘာကိုစောင့်ဆိုင်း" သို့မဟုတ် "အဘယ်အရာကိုစောင့်ဆိုင်း"? ငါဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲဒါကိုခွင့်ပြုထားသည်ဟုထင်ပါတယ် "စောင့်ဆိုင်း" ကြိယာစွပ်စွဲချက်သို့မဟုတ်မျိုးရိုးဗီဇအမှုနှင့်အတူတူ။ ခြားနားချက်…
Sanskrit သည်ရုရှားနှင့်ဆင်တူသည်မှန်ပါသလား။ အမှန်တရား။ သို့သော်ဥရောပဘာသာစကားများသည် Sanskrit ထက်ရုရှားထက်ပိုမိုများပြားသည်။ ဤရွေ့ကားဥပမာ, Gypsy နှင့် Ossetian ဖြစ်ကြသည်။ အီရန် (ဖာစီ) နှင့်အာဖဂန် (ပါရှူး) ...
Tulle, ကုလားကာ - ဘယ်လိုမျိုး? tulle-masculine veil-feminine အချို့သောစကားလုံးများသည်အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှကျား၊ ဥပမာအားဖြင့်နာမ်။ _shadow_ သည်တစ်ချိန်ကပုလ်ဆန်ခဲ့သည်, ထို့ကြောင့်နိမ့်ကျသောပုံစံ _shadow_ ။ _Coffee_ တစ်ချိန်က _coffee_ - အထီး ...
အတွင်းပိုင်းရှက်ဖွယ်မေးခွန်းတစ်ခုကိုမင်းကိုရှင်းပြဖို့ကြိုးစားပါရစေ။ ... ည ၈း၀၀ ဆိုပါစို့။ ဆိုလိုသည်မှာထိုနေ့၏ ၈ နာရီအတိအကျဖြစ်သည်။ ထိုအခါကိုးနာရီနာရီစတင်ခဲ့သည်။ ယခုမှာ ...
အောက်ပါအချက်အလက်များအတွက်အောက်ပါအချက်များရွေးချယ်ရန်ကူညီပါ။ ၁ ခိုင်ခံ့သောတစ်ရှူး ၂ အားကောင်းသောလူတစ် ဦး ၃ ခိုင်ခံ့သောနှင်းခဲ 1 ခိုင်မာသည့်ခင်မင်မှု ၁) ခိုင်ခံ့သောထည် ၂) ကျန်းမာသန်စွမ်းသူ ၃) အေးစိမ့်သောလတ်ဆတ်မှု ၄) ခင်မင်ရင်းနှီးမှုခိုင်ခံ့သောထည်၊
ယူကရိန်းတွင် pidkazhit yak vidredaguvati စာလုံးများ။ movi Nevrno vikonuyuchy obov * အတွင်းရေးမှူး၏ဘာသာစကား Kerkauchy အဆိုပါ dumka အပေါ်စီးပွားရေးကျဆင်းမှုရှင်းရှင်းလင်းလင်းလွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ရှိပါတယ် .... chiys bk (ဆောင်းပါးအပေါ် ... ) ကို zvdsi အတွက် rstratsya ပါဝင်သူစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုသွားကျေးဇူးတင်ကြောင်းဖယ်ရှားပစ် ...
ဘီလာရုစ်, ဘီလာရုစ်, ဘီလာရုစ်? ဘယ်လိုမှန်လဲ ဘီလာရုသို့မဟုတ်ဘီလာရုစ်ကုန်ပစ္စည်းများ? ဒီလူဟာဘီလာရုစ်လား၊ ဘီလာရုစ်လား။
ဘီလာရုစ်, ဘီလာရုစ်, ဘီလာရုစ်? ဘယ်လိုမှန်လဲ ဘီလာရုသို့မဟုတ်ဘီလာရုစ်ကုန်ပစ္စည်းများ? ဒီလူဟာဘီလာရုစ်လား၊ ဘီလာရုစ်လား။ ရုရှားဘာသာဖြင့်ဘီလာရုစ်စကားလုံးကိုဘာသာပြန်ခြင်းမှသာမကဘာသာတရား၏ပါ ၀ င်မှုအယူအဆများလည်းပါ ၀ င်သည်။
Erzyans သည် Mokshans နှင့်မည်သို့ကွာခြားသနည်း။ ဘာသာစကားကဘယ်လိုကွာခြားလဲ။ မီတာ။ ခ။ အချို့သောနှိုင်းယှဉ်ချက်များဗစ်တိုးရီးယားဤနေရာတွင်အောက်သို့လှိမ့်ပါ။ စကားလုံးများ၏ကွဲပြားခြားနားမှုများပါသည့်ဇယားလည်းရှိသည်။ http://www.cigankin.ru/archives/581
ဂျာမန် nicht, kein, nichts အကြားကွာခြားချက်ကဘာလဲ။ nicht - kein မဟုတ် - nichts no - ဤရွေ့ကား negation ကိုဖော်ပြသည့်နည်းလမ်းများဖြစ်သည်။ ငါအဲဒီမှာရှိနေတာဘယ်လောက်ခက်ခဲသလဲဆိုတာမင်းမမြင်နိုင်ဘူး။
Ramil ဆိုတဲ့နာမည်ကဆိုလိုတာပါ။ အာရဗီဘာသာမှပြန်ဆိုလိုက်သောရာမလ်သည်မှော်၊ အံ့သြဖွယ်၊ အံ့ဖွယ်ဖြစ်သည်။ အာရဗီဘာသာတွင် raml ဆိုသည်မှာသဲထဲတွင်ကံကြမ္မာကိုပြောပြခြင်းဖြစ်သည်။
အဘယ်ကြောင့်“ အပြစ်ရှိသည်မဟုတ်” သည်အဘယ်ကြောင့်အမြဲတစေသီးခြားစီဖြစ်ပြီး“ အပြစ်မဲ့” သည်အများအားဖြင့်အတူတူဖြစ်လေ့ရှိသနည်း။ !
အဘယ်ကြောင့်“ အပြစ်ရှိသည်မဟုတ်” သည်အဘယ်ကြောင့်အမြဲသီးခြားစီဖြစ်ပြီး“ အပြစ်မဲ့” သည်အများအားဖြင့်အတူတကွဖြစ်လေ့ရှိသနည်း။ ! .. နှင့်ကြိယာများမှ“ not” ကိုသီးခြားစီရေးသားထားသည်🙂သို့သော်ယေဘုယျအားဖြင့်သင်သည်“ not” ကိုနာမဝိသေသနများ၊
အက်စတိုးနီးယားကိုသင်ကိုယ်တိုင်ဘယ်လိုလေ့လာမလဲ။ မြို့ထဲမှာဘာသာစကားသင်ကြားသူမရှိဘူး၊ ဒါပေမယ့်ငါတို့လက်မလျှော့ဘူး။ http://www.eki.ee/books/ekk09/ http://langust.ru/news/16_10_12.shtml http://openlanguage.ru/inform/inslozhnye_jazyki_mira http://www.languages-study.com/ eesti-links.html http://www.eestikeel.ru/ https://sites.google.com/site/eestikeelkool/ ကံကောင်းပါစေ။ အက်စတိုးနီးယားသည်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အလွန်ခက်ခဲသောဘာသာစကားမဟုတ်ပါ ...
"ငါအလိုရှိ!" ကဘာလဲ ဂျာမန်လား အဲဒါကိုဘယ်လိုရေးသားသလဲ၊ ဘာကိုဆိုလိုတာလဲ။
"ငါအလိုရှိ!" ကဘာလဲ ဂျာမန်လား အဲဒါကိုဘယ်လိုရေးသားသလဲ၊ ဘာကိုဆိုလိုတာလဲ။ jawohl စစ်တပ်တွင် - ထိုအရာသည်သာမန်ဘဝ၌ပင်မှန်ပါသည်၊ အမှန်မှာ၊ တိတိကျကျ၊ လုံးဝမှန်ကန်သည်၊ Ja Jaohl! ...
219 စက္ကန့်အတွင်းထုတ်ပေး 1 ဒေတာဘေ့စမေးမြန်းမှု, ။